INTERNATIONAL « LaasqorayNET: Heelo Waa Heelo Laasqoray!
Loading...You are here: Home > INTERNATIONAL
By Samir Abdullah / May 7, 2013 / BREAKING SOMALI NEWS!, HEADLINES, INTERNATIONAL / Comments Off
ICC oo shaacisay inay sii wadayso Dacwadda loo haysto Uhuru Kenyatta
By admin / March 22, 2013 / INTERNATIONAL / Comments Off
Maxkamadda dambiyada caalamka (ICC) ayaa sheegtay inay sii wadayso dacwadda loo haysto madaxweyaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta oo ku eedeysan inuu ku lug lahaa rabshado 2007-dii ka dhacay dalkaas, kaddib markii lagu murmay doorashadii madaxnimo ee xilligaas dhacday, Xeer-ilaaliyaha ICC-da Fatou Bensouda ayaa sheegtay in dacwadda loo haysto Kenyatta ay sii socon doonto, balse ma [...]
Kuuriyada Waqooyi oo hanjabtay
By admin / March 8, 2013 / BREAKING SOMALI NEWS!, INTERNATIONAL / Comments Off
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay goyneyso dhamaan heshiisyadii kala dhaxeeyay dalka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ay kaga jawaabeyso cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay. Golaha Ammaanka ee Qaramada ayaa cunaqabateyn ada oo cusub ku soo rogaya dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay tijaabisay nukliyeerkeedii ugu dambeeyyay bishii Febraayo. Arrintan ayaa soo baxday iyada oo [...]
Ciidanka Faransiiska oo Qabsaday Garoonka Timbuktu.
By admin / January 29, 2013 / INTERNATIONAL, News / Comments Off
Xoogagga Faransiiska ayaa qabsaday garoonka diyaaradaha iyo wadooyinka gala magaalada Timbuktu, iyagoo sii wada howlgalka ay kooxaha xag jirka ah uga saarayaan wuqooyiga dalka Mali. Xoogagga Milateriga ayaa sheegay in ciidanka dhulka iyo kuwa dalaayadaha ku booda oo wata Helicoptaro ay la wareegeen gacan ku haynta garoonka diyaara ee magaalada. Hay’adda hidaha iyo dhaqanka u [...]
Kuuriyada Waqooyi oo digniin bixisay.
By admin / January 25, 2013 / INTERNATIONAL / Comments Off
Kuuriyada Woqooyi ayaa soo saartay digniin ku socota Kuuriyada Koofureed oo sheegaysa inay filato jawaab gacan ka hadal ah haddii ay taageerto cunaqabateyn ay Qaramada Midoobay meelmarisay toddobaadkan. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Woqooyi waxay daabacday hadalkan maalin kaddib markii waddankaasi uu ku dhawaaqay inuu fulinayo tijaabo 3aad ee hubka nukliyeerka ah. Kaddib hadal caro leh [...]
Raysalwasaaha Keenya oo sheegay inaysan wada hadal la galayn Al-shabaab.
Raysal-wasaaraha dalka Keenya Raila Odinga oo ka jawaabayay fariin muuqaala oo internetka ay soo galisay xarakada Al-shabaab oo ay ka dhex muuqdeen la haystayaal keenyaana ayaa sheegay inaysan haba yaraatee wax wada hadala la galayn dhaq-dhaqaaqaas. Odinga ayaa tilmaamay in dowladaha qaybta ka ah Midowga Afrika in ay ka mideysanyihiin in dagaalo lagu qaado ururada [...]
Qaraxyo ay Dad Badan ku Dhinteen oo ka Dhacay Pakistan.
By admin / January 11, 2013 / INTERNATIONAL / Comments Off
Afar Qarax oo kala gooni gooni ah ayaa ku dilay dalka Pakistan 110 qof, ku dhawaad 250 kalena wey ku dhaawacmeen, Khamiistii shalay, waxaana 92 ka mid ah dadkaasi ay ku dhinteen Magaalada Quetta. Booliskta Magaalada caasimadda u ah gobolka Baluchistan, ayaa sheegaya in qof isa soo miidaamiyay uu isku dhex qarxiyay, hool laga [...]
Maraykanka oo $10 milyan dul dhigay niman u dhashay Sudan
Maraykanka oo $10 milyan dul dhigay niman u dhashay Sudan Dawlada Maraykanka ayaa sheegtay in ay siin doonto lacag dhan $10 Milyan doo doolar qofkii u soo gudbiya kooxo argagaxiso lagu tuhmaayo oo ay raadinayso xog lagu soo xiri karo Laba Xubnood oo dhashay dalka Sudan. Labadan Xubnood ayaa la rumaysan yahay in ay u [...]
Obama ayaa ku baaqay ‘wax qabad’
By admin / December 20, 2012 / INTERNATIONAL, News / Comments Off
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, ayaa weydiistay ku xigeenkiisa, Joe Biden, inuu la yimaado qorshooyin adag oo wax looga qabanayo dhibaatada hubka bisha soo socota. Arrintan ayaa timid kadib dhacdadii Jimcihii oo nin dabley ah uu toogasho ku dilay 20 caruur ah iyo lix qof oo kaleiskuu ku yaal magaalada Newtown ee gobolka Connecticut. Mr [...]
Dastuurka dalka Masar oo saaka Afti loo qaadayo.
By admin / December 15, 2012 / INTERNATIONAL, News / Comments Off
Dadka Reer Masar ayaa saaka oo sabti ah u dareeraya codeynta Aftida dastuurka cusub ee dalkaasi ee lagu muransanyahay, arintan oo ka dambeysa mudaaharaadyonudooyinkii ugu danbeeyey gacan ka hadal dhaliyay oo dalkaasi hareeyay. Isku dhacyo ayaa dhex maray dibad baxayaal dhagxaan tuurayay oo iska soo horjeeda Jimcihii shala, meel ku dhow masjid ku yaala magaalada [...]